प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? स्वाथ्यको लागि घातक ! | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? स्वाथ्यको लागि घातक !
एजेन्सी – प्राय मानिसहरु बोतलमा या त प्लास्टिकको गिलासमा पानी पिउने गर्दछन्। अहिले त झन बोतल र गिलासमा पानी पिउने फेशनकै रुपमा आएको छ। घरबाट बाहिर निस्कदां पानी साथमा लिने गर्नुभएको छ भने कस्तो बोतल प्रयोग गर्नुहुन्छ ? त्यसमाथि प्लाष्टिकको बोतल प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने अझ बढी सर्तक रहनुहोला । बोतल र गिलासमा पानी पिउनु मानव स्वाथ्यको लागि घातक मानिएको छ।
एक अध्ययनका अनुसार बोतल र प्लास्टिकको गिलासमा राखिएको पानीमा बिसफेनोल ए नामक रसायन मिसिएको हुन्छ जसले मानिसको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिएको छ। क्यानडाको युनिवर्सिटि अफ ओटावाका सोधकर्ता डा।अलफोंसोले प्लाष्टिकको बोतलमा पाइने बिपीए ले शरीरको उर्जा तथा हर्मोनको सन्तुलन बिगार्ने बताएका छन् । त्यसको फलस्वरुप शरीरमा विभिन्न किसिमको अनावश्यक परिवर्तन हुने बताइएको छ । बच्चाहरुमा मोटोपनाको समस्या समेत देखिन सक्ने पनि उक्त अध्ययनमा बताईएको छ ।
एक अध्ययन पछि सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पानीले भरिएको प्लाष्टिकको बोतल केही घण्टा घाममा राख्दा विषालु हुने पनि बताइएको थियो । त्यसले पेटको डरलाग्दो रोग निम्त्याउने उल्लेख गरिएको थियो । प्लाष्टिकको बोतलमा पानी पिउनु क्यान्सर रोगको कारण बन्न सक्ने पनि बताइन्छ ।
यसबाट बच्न तपाईले बिसफेनोल ए मुक्त बोतल वा प्लाष्टिकको गिलास छान्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै सिसाको बोतललाई प्राकृतिक वस्तुबाट बनाइएको हुँदा यो स्वाथ्यको लागि सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ। सूर्यको किरणबाट प्लास्टिकको बोतल वा गिलासमा रहेको बिसफेनोल ए रसायन पानीमा मिल्न जान्छ।यसले मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सानी पुर्याउने भएकाले तपाईले प्लास्टिकको बोतल वा गिलासलाई सूर्यको करणबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ।
यदि तपाई स्वादिस्ट पानी पिउन चाहनुहुन्छ भने सिसाको बोतलको प्रयोग गर्नुस् किनकी यसमा प्लास्टिकको बोतलले निबुवा वा अन्य अमिलो चिजबाट आउने स्वादले परिवर्तन गरिदिने गर्दछ। यति मात्रै नभएर यदि ठीकसँग प्लास्टिकको बोतल वा गिलासलाई सफा नगरिए किटाणु समेत फैलने सम्भावना धेरै हुन्छ।
यदि तपाईको घरमा बालबालिका छन् भने प्लास्टिकको बोतल वा गिलासको साट्टा सिसाको गिलास वा बोतल प्रयोग गर्नुस्। सिसा बालबालिकाले फुटाउने सम्भावना धेरै भएकाले सिलिकनको एक पत्रले बनेको गिलास वा बोतल किन्नु जुन हतपत्त फुट्दैन्।
प्लास्टिकको बोतल वा गिलासलाई कडा चीजले सफा नगर्नुस्।किनकी गिलास वा बोतलमा रहेको पोलीकार्बोनेट चाडैँ फुट्छ। तातो पानी वा अन्य तरल पदार्थ प्लाष्टिकको बोतल वा गिलासमा नराख्नुस् किनकी यसमा भएको हानिकारक रसायन मिल्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ र यसबाट मानवीय स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने आशंका हुन्छ।
सबै प्रकारको प्लास्टिकको बोतल वा गिलास एक पटकभन्दा बढी प्रयोग नगर्नुस्। जस्तोकी कोल्ड ड्रिंक्स को बोतल, मिनरल पानीको बोतल, चियाको गिलास आदि। यदि तपाईले पुनस् दोस्रो पटक प्रयोग गर्नुभयो भने बोतलमा रहेको कारसिनोजेनिक नामक पदार्थ पानीमा मिल्न जान्छ र स्वाथ्यको लागि हानिकारक हुन्छ।
पर्यटन कात्तिक २४, २०७६
स्वास्थ्य कात्तिक २७, २०१९
स्वास्थ्य मंसिर ७, २०१८
स्वास्थ्य भदौ २५, २०१८
स्वास्थ्य कात्तिक १६, २०१८